कसरी फोन सेट अप X.ms/xboxsetup को साथ Xbox सेटअप गर्ने? - गेमि।
यसको सबै उत्कृष्टताको बावजुद, तपाईंको Xbox फर्मवेयर अपडेट गर्नु कठिन काम हुन सक्छ। यदि तपाईंलाई कसरी थाहा छैन भनेडिजिटल अनुप्रयोग र तपाइँको Xbox को सेटअप संग समन्वय, तपाइँ डेटा हराउने जोखिम। यस भन्दा बढि, तपाईं सदाको लागि पर्दामा फस्न सक्नुहुन्छ।
यस लेखमा, तपाई Xbox को डिजिटल अनुप्रयोग र यो कसरी तपाईंलाई फाइदा हुन्छ को बारे मा सबै कुरा जान्न हुनेछ। लेखले समस्या निवारण गर्नका लागि केहि सामान्य गल्तीहरू र त्रुटिहरू हाइलाइट गर्दछ। त्यसो भए, सुरु गरौं!
उर्फ .ms/xboxsetup के हो?
तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ कि स्मार्टफोनको लागि आधिकारिक Xbox अनुप्रयोग छ। यो उत्तम एन्ड्रोइड र आईफोन प्लेटफार्मको साथ काम गर्दछ।Xbox अनुप्रयोग सुविधाहरू र आरामको एक विस्तृत श्रृंखलाको साथ आउँदछ। जे होस्, तपाईसँग सेटअप कोड हुनु पर्छ तपाईको स्मार्टफोनमा पूर्ण पहुँच गर्न। जब तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनको लागि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहुन्छ, कोड तपाईंको लागि फ्ल्यास हुनेछ। यो कोड नोट गर्नु महत्वपूर्ण छ।
माथिको दिइएको वेबसाइट तपाईंको Xbox अनुप्रयोग सेट अप गर्न र यसलाई तपाईंको कन्सोलको साथ डिजिटलमा जडानको लागि गेटवे हो। यसले तपाईंको Xbox अपडेट गर्न र नयाँ फर्मवेयर स्थापना गर्न म्यानुअल विकल्पको रूपमा पनि काम गर्दछ। तसर्थ, जब तपाइँ तपाइँको Xbox सेटअप शुरू गर्नुहुन्छ, यसले लिंक सहित तपाइँलाई कोड देखाउँदछ।
जे होस्, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई स्पष्ट पार्दैन कि उनीहरूले यो कोड नोट गर्नुपर्नेछ किन कि पछि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अधिक व्यक्ति QR कोड स्क्यानर वा लिंक प्रयोग गर्दछन्, यो सोच राख्दै कि यसले तिनीहरूलाई पहुँच प्रदान गर्दछ। फलस्वरूप? एकचोटि तपाईंले अनुप्रयोग स्थापना गरिसकेपछि, उही कोडको लागि सोध्दछ। अब, यदि तपाईंले यसलाई नोट गर्नुभएन भने, तपाईं यसलाई पुनः प्राप्त गर्न कुनै तरिका छैन। वा त्यहाँ छ?
माइक्रोसफ्ट Minecraft रिमोटकनेक्ट त्रुटि फिक्स गर्नुहोस्
निन्टेन्डो स्विच बनाम स्विच लाइट
तपाईं कसरी कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
कोड पुनः प्राप्त गर्नका लागि उत्तम निश्चित तरिका तपाईको फोनबाट अनुप्रयोगको स्थापना हटाईएको छ र स्थापना प्रक्रियालाई पुन: स्थापित गर्नु हो। यो सम्भवतः कोड तपाईलाई फेरि देखाउँने को लागी नोट गरीएको छ। Xbox लाई फ्याक्ट्री रिसेट नगर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई सबै आवश्यक डाटा हराउँदछ, र फर्मवेयर अद्यावधिक रहन सक्छ।
के हो यदि पुनर्स्थापनाले काम गर्दैन?
त्यसो भए तपाईको अन्तिम आशा भनेको ग्राहक समर्थनलाई सम्पर्क गर्नु हो। यद्यपि माथिको-प्रदान गरिएको समाधानले प्राय जसो समय ठीक काम गर्दछ, तपाईं एप्लिकेसनलाई प्रभावकारी रूपमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। हो, यो बुझ्दछ कि Xbox ले यी सेटअप दिशानिर्देशहरू अझ राम्रोसँग स्पष्ट पार्नु पर्छ।
तपाइँको अनुप्रयोगको साथ Xbox सेटअप कसरी गर्ने?
यो निर्बाध प्रक्रिया हो, तर कहिलेकाँही तपाई पहिला के गर्ने भनेर अलमल्लमा पर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एक निर्देशिका छ जुन प्रक्रिया अनुसरण गर्न सजिलो राख्छ:
पहिलो, तपाईले यति धेरै पढिरहनु भएको कोड प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यसको लागि, तपाइँले वेबसाइट भ्रमण गर्नुपर्नेछ, aka.ms/xboxsetup । वैकल्पिक रूपमा, तपाईं Xbox को सेटअप स्क्रिनमा साइट पहुँच गर्न QR कोड स्क्यानर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको फोनमा कोड पाउनुहुनेछ। यसलाई नोट गर्नुहोस्, र त्यसपछि प्ले स्टोर वा अफिसियल वेबसाइटमा जानुहोस् Xbox अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् । यो कोड नोट गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
एक पटक अनुप्रयोग उपकरणमा स्थापना भएपछि, यसलाई सुरुवात गर्नुहोस्, र सेटअप जारी राख्नुहोस्। तपाईंको आधिकारिक Xbox आईडीको साथ लग इन गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई कोड प्रविष्ट गर्न सोध्नेछ। यदि तपाईंले यसलाई नोट गर्नुभयो भने, यो हावा हुनु हुन्थ्यो।
अब यसले तपाईलाई प्राथमिकता र सेटअप को लागी केहि प्रश्न सोध्नेछ। मार्फत पछ्याउनुहोस्।
एक पटक तपाईंको Xbox सेट अप भएपछि, यसले तपाईंलाई अनुप्रयोगमा सेटि applyहरू लागू गर्न अनुरोध गर्दछ। यो निश्चित गर्नुहोस्, र तपाईंसँग तपाईंको Xbox कन्सोलसँग अनुप्रयोगको सिnc्क हुनेछ।
किन तपाईं कन्सोलको साथ आफ्नो डिजिटल अनुप्रयोग सेटअप र सिंक गर्नु पर्छ?
त्यहाँ असंख्य सुविधाहरू छन् र पहुँचको सहजता जुन आधिकारिक Xbox अनुप्रयोगको साथ आउँदछ। यसले तपाइँलाई तपाइँका साथीहरू र समुदायसँग जडान गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईं आफ्नो खेल ट्र्याक राख्न र सबै आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। Xbox को भित्र निर्मित हब जस्तै, तपाईंसँग खेलहरू किन्दा र त्यस्ता विकल्पहरूमा पहुँच छ। समग्रमा, यो क्लाउड प्लेटफर्म जस्तो छ तपाईको Xbox कन्सोलको लागि जुन तपाइँको स्मार्टफोनसँग सजिलैसँग जोड्दछ।
तपाइँ Xbox अनुप्रयोगको साथ के गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाइँ तपाइँको Xbox कन्सोल नियंत्रकको आवश्यकता बिना नै नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई कन्सोल नेभिगेट गर्न वा तपाईंको फोन मार्फत कुञ्जी शब्दहरू र अन्य समान सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्षम गर्दछ। त्यसकारण यसले समय उपभोग गर्ने कन्सोल नियन्त्रणहरूको आवश्यकतालाई खारेज गर्दछ।
अनुप्रयोग एक मिडिया नियंत्रकको साथ आउँदछ जुन तपाईंलाई रेकर्डिंग भिडियोहरू, स्क्रिनशटहरू, र अधिकको रूपमा सुविधाहरूको विस्तृत वर्गीकरण ल्याउँछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं खेल खेल्न वा पज गर्न अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। Xbox ले अब अन्य अनुप्रयोगहरूलाई समर्थन गर्दछ, विशेष गरी नेटफ्लिक्स जस्तै स्ट्रिमिंग, तपाईं यसलाई आफ्नो स्मार्टफोन मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई ठूलो स्क्रिनमा आरम्भ गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रारम्भमा, यो तपाइँको Xbox को लागी रिमोट कन्ट्रोल राख्नु जस्तै हो जसले यसलाई खेल नियन्त्रकबाट अलग गर्दछ।
तपाईं स्क्रीनशटहरू कब्जा गर्न सक्नुहुनेछ, स्क्रीनहरू रेकर्ड गर्नुहोस्, र यी क्लिपहरू बचत गर्नुहोस्। यस सुविधालाई सक्रिय पार्न तपाईलाई कन्सोलमा जानको आवश्यकता छैन। यदि तपाईं हाल खेल खेल्ने ब्लास्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं छिटो स्क्रिन रेकर्डिंग सुरू गर्न आफ्नो स्मार्टफोनको अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Xbox PaaS र क्लाउड गेमि toको समान, तपाईं फोनको अनुप्रयोग मार्फत तपाईंको कन्सोलको लागि खेल खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। यसैले, तपाइँ खेलहरू पाउनको लागि तपाइँको गेमि con कन्सोल २//7 मा हुनुपर्दैन। यदि तपाईं स्कूलमा हुनुहुन्छ, काम गर्दै वा कम्युटमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं अझै पनि सम्झौताहरू र खेलहरू ट्र्याक राख्न सक्नुहुन्छ।
LFG र प्रत्यक्ष क्लब:
तपाईं समूह र Xbox प्रत्यक्ष समूहहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई Xbox अनुप्रयोगका अन्य प्लेयरहरू र प्रयोगकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्षम गर्दछ। यसका साथै, तपाई आफ्नो Xbox कन्सोलमा प्लेयरहरूसँग सहजै जडान र प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। अनुप्रयोग यसको संचार सुविधाहरू बिना छैन। एउटा सन्देश सुविधाले तपाईंलाई सन्देश (वा निजी) सन्देशहरू उनीहरूसँग कुराकानी गर्न अनुमति दिन्छ।
आशा छ, यो गाइडले तपाईको सेटअप प्रक्रियाको साथ अनुसरण गर्न र डिजिटल अनुप्रयोग सक्रिय गर्न सजिलो बनाउँदछ। याद राख्नुहोस्, उद्देश्य भनेको Xbox म्यानुअली अपडेट गर्नु हो र यसलाई तपाईंको डिजिटल अनुप्रयोगको साथ सेट अप गर्नु हो। यो गाइड पुरानो कन्सोलहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ किनकि Xbox लगातार अनुप्रयोगहरूसँग कुनै कन्सोल र पूर्ण अनुकूलता प्रयोग गरेर पनि खेल्नको लागि क्षमता ल्याउँदछ, यहाँसम्म कि पुराना र नयाँ कन्सोलहरूको लागि। रमाईलो गर्नुहोस् र निर्दोष गेमिंगको आनन्द लिनुहोस्!
PS5 vs Xbox श्रृंखला X - कुन उत्तम छ?
नयाँ पुटलोकर साइट के हो
प्रीमियम र hulu विद्यार्थी हालतमा
साइन अप बिना अनलाइन मुफ्त फिल्महरू
विन्डोज १० का लागि क्रोमकास्ट विस्तार स्थापना गर्नुहोस्
www १२3 चलचित्रहरू com मा
साइन अप बिना नै फिल्महरू स्ट्रिम गर्न उत्तम साइटहरू
संगीत निःशुल्क अनलाइन डाउनलोड डाउनलोड सुन्नुहोस्